Inani le-Cadastral: liyini, izici ezinomthelela nokuthi ungayithola kanjani | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 31/05/2021 20:10 | Kubuyekezwe ku- 31/05/2021 20:12 | indawo yokuhlala
Inani le-cadastral lingenye yemigomo esiyithanda kakhulu. Kepha nalabo esibazonda kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi kunezikhathi lapho leli nani lingadala ukuthi sithole izindaba ezinhle; futhi ngasikhathi sinye lapho kufanele siklwebhe amaphakethe ethu ukubhekana nezintela ezisabekayo.
Kodwa, Iyini inani le-cadastral? Yenzelwe ini? Ibalwa kanjani? Namuhla sizokhuluma nawe kabanzi ngaleli gama okumele ulazi ngekhanda.
1 Iyini inani le-cadastral
1.1 Inani le-Cadastral nenani lokuhlola
2 Izici ezithonya inani le-cadastral
3 Ungalibala kanjani inani le-cadastral ye-real estate
3.1 Ngokutholwa kwe-IBI
3.2 Ngereferensi ye-cadastral
4 Ungalicela kanjani inani ku-Cadastre
Iyini inani le-cadastral
Inani le-cadastral yi- inani elinikezwa indawo yangempela ngendlela yokuthi kutholakala ukuthi liyini inani lalokhu. Isibonelo, ake ucabange ukuthi unendlu emgwaqweni "ocebile". Inani le-cadastral lalelo khaya lizophakama ngendawo, kodwa futhi nangokuthi indlu injani.
Empeleni, izindlela zokuhlola sezivele zinqunywe ngumkhandlu ngamunye phambilini, ngendlela yokuthi alifani kwelinye idolobha nakwelinye, yize lifana kakhulu.
Zonke lezi zindawo zibhaliswe ngenkani eCadastre, okuyiyona eqoqa inani lazo zonke izindlu ezithengiswayo. Kuyinqubo yamahhala futhi esesidlangalaleni, ngakho-ke ungakwazi ukuxhumana kalula nakho kokubili okungokwakho nokunye.
Inani le-Cadastral nenani lokuhlola
Baningi abathi, ngephutha, bacabange ukuthi inani le-cadastral nenani elilinganisiwe liyafana, kanti empeleni akunjalo. I-appraisal iyona esetshenziswayo lapho ucela imali ebanjiswayo, futhi leli nani lingaphakama noma libe ngaphansi kune-cadastral.
Ngaphezu kwalokho, iyona esetshenziselwa ukusetha intengo yokuthenga noma yokuthengisa yalokho okuhle. Futhi elinye iphuzu okufanele ulinake, inani elilinganisiwe liyashintshashintsha ngokuya ngezimo zemakethe, ngendlela yokuthi nganoma yisiphi isikhathi esithile lingabiza ngaphezulu noma ngaphansi.
Izici ezithonya inani le-cadastral
Yize singeke sikutshele konke okuzoba nomthelela kumuntu wokugcina, kunezinto ezithile ezinquma, ngezinga elikhulu noma elincane, inani le-cadastral lesakhiwo. Lezi izi:
Indawo noma indawo. Lokho kungukuthi, indawo lapho lokho kuhle kukhona nokuthi yini okuzungezile.
Izinto ezisetshenziswa ekwakheni. Hhayi lokho kuphela, kodwa nangendlela eyakhiwe ngayo, izindleko, ikhwalithi, ubudala bempahla ...
Inani lemakethe. Yebo, intengo le ndawo engafinyelela kuyo emakethe inethonya ngandlela thile, kungaba ukuyithenga noma ukuyithengisa. Ngakho-ke, kufanele wazi ukuthi inani le-cadastral alisoze leqa inani lemakethe. Inkinga ukuthi lokhu kusho ukuthi kufanele kube nokubuyekezwa okuqhubekayo kwalelo nani le-cadastral ukuze lihambisane nalokho esikushilo.
Ungalibala kanjani inani le-cadastral ye-real estate
Cabanga ukuthi unendawo yangempela, kungaba yindlu, ifulethi, indawo ... Ungafuna ukwazi ukuthi liyini inani layo le-cadastral,
Ukuyibala, Kufanele ungeze kokubili inani lomhlaba nalokho kwesakhiwo. Kulokhu kumele kungezwe izindlela ezithile ezinqunywe yimithetho yomasipala. Kungakho singeke sikutshele ifomula ncamashi, kepha kungcono ukwazi ukuthi yini leyo mibandela yokuhlola nedatha elandelayo:
Ikhwalithi nobudala bempahla.
Umlando, amasiko, inani lobuciko.
Kunoma ikuphi, awudingi ukusangana ngokucela le datha, ngoba kunezindlela ezimbili zokwazi inani le-cadastral ngaphandle kokwenza izibalo. Lawa mafomu yilawa:
Njengoba wazi, yonke ingcebo kumele imenyezelwe eCadastre futhi, ngaphansi kwenani le-cadastral, kufanele ukhokhe intela, akunjalo? Kulowo risidi we-IBI, okhokhwa minyaka yonke, kuvezwa inani le-cadastral yempahla.
Hhayi lokho kuphela, kodwa Ngakolunye uhlangothi, kwehla inani lomhlaba owakhe; futhi, ngakolunye, inani lokwakhiwa.
Uma kwenzeka ungenayo irisidi, kodwa uyakhumbula ukuthi ukhokhe malini, ungayibala kalula. Vele, kufanele wazi ukuthi iyiphi intela esetshenziselwe wena (uthola ukuthi kwiRegistry Registry).
Enye indlela yokuthola inani le-cadastral yendawo ingukubhekiswa kwe-cadastral, okungukuthi, nge ikhodi enamadijithi angamashumi amabili ekhomba okuhle ngakunye. Uma unayo, ku-inthanethi noma ngokushayela iCadastre, bangakunika inombolo ofuna ukuyazi.
Ungalicela kanjani inani ku-Cadastre
Njengoba sishilo ngaphambili, inani le-cadastral akuyona "eyimfihlo" noma ifihliwe. Kusesidlangalaleni futhi, noma ngabe ungumnikazi waleyo mpahla yomphakathi noma cha, ungafinyelela imininingwane ethile.
Vele, akufani nokuthi ungumnikazi kunalokho ongekho. Uma ungeyena umnikazi, idatha kuphela ozokwazi ukuyifinyelela Yilezi ezilandelayo:
Sebenzisa noma lapho uya khona.
Isicelo saleli nani singenziwa ku-inthanethi noma ngocingo futhi kulokhu kufanele uxhumane neCadastre, okuwumzimba olawula yonke le datha.
Ngaphambi kokuthi sikutshele ukuthi inani le-cadastral libalulekile kwizintela. Futhi ngukuthi, ngokususelwa kulokhu uzokhokha ngaphezulu noma ngaphansi. Ngokuqondile, izintela ezithinta inani lempahla Yilezi:
Intela Yomuntu siqu (Intela Yomuntu siqu).
I-IBI (Intela Yezakhiwo).
IP (Intela Yomcebo).
Inzuzo yemali kaMasipala (Intela kaMasipala enanini lomhlaba).
Ifa nentela yesipho.
I-ITPAJD (Intela yokudluliswa kwemindeni kanye nezenzo zomthetho ezibhalwe phansi).
Ingabe inani le-cadastral licace kuwe manje? Khumbula ukuthi, uma ungabaza, iCadastre ingakusiza wazi ukuthi kungani indawo yakho ingunenani lelo hhayi elinye.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » indawo yokuhlala » Inani le-Cadastral